Kwakumelwe izimfundamakhwela ziyaye kakhulu zokuziphatha nokungabi nasihe ngiyolwa nanoma ubani ezazifuna amandla abo. umlando WaseRoma lichaza indlela kwamazinyo abo zokuziphatha nezingokomoya ukusakaza ungukubola yayo imithetho yombusi futhi zonke izigaba zokuphila. Futhi kwaba le kokuziphatha nangokomoya ukuthi lilethe lo umbuso uyaziqhenya amacala kanye isixazululo.
Ngeshwa, kuyokuhambela ezweni lakithi ngendlela efanayo uma uqhubeka kule endleleni, ngokomoya nangokokuziphatha. It kubukela okuyi ukuzivikela ezingokomoya ukuthi singaphendula kuphela uthole noJesu Kristu. Singabantu, ngamanye amazwi isidingo inhlekelele i ivangeli ezweni imvuselelo. Kungenjalo isono umnumzana isikhathi ngesikhathi esifanele nakakhulu zilawule kuleli zwe, ezifana nomzingeli ehlasela ababuthaka.